/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Mitoxantrone HCL ntụ ntụ
Rating: SKU: 70476-82-3. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
Mitoxantrone hydrochloride ntụ ntụ bụ ọgwụ cancer nke na-egbochi uto na mgbasa nke mkpụrụ ndụ cancer n'ime ahụ. A na-eji Mitoxantrone HCL eme ihe iji gwọọ ọrịa cancer prostate na ụdị ụfọdụ nke ọrịa leukemia. A na-ejikwa Mitoxantrone HCL ntụ ntụ iji gwọọ ihe mgbaàmà nke ịmegharị ọtụtụ sclerosis. Ọgwụ a agaghị agwọ ọtụtụ ọrịa sclerosis.
Usoro Molecular: C22H30Cl2N4O6
Molekụla arọ: 517.4
Ekwesighi iji ya maka ọgwụgwọ MS na ndị ọrịa nwere usoro LVEF <50% (nsị na-egbu egbu na ịdọ aka na ntị). n'ozuzu adịghị atụ aro maka iji ndị nwere mmerụ ahụ na-arịa ọrịa ịba umeji (lee n'okpuru nlezianya) ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ neutrophil <1500 / mm3
Ọ bụrụ na nzaghachi antileukemic na usoro ntinye nke mbụ ezughi oke, usoro ntinye nke abụọ gụnyere 2 ụbọchị nke mitoxantrone HCL ntụ ntụ (12 mg / m2 kwa ụbọchị) na ụbọchị 5 nke cytarabine (100 mg / m2 kwa ụbọchị) nwere ike inye.
12-14 mg / m2 otu ugboro ụbọchị 21; nye dị ka ihe mgbakwunye na ọgwụgwọ corticosteroid (dịka, prednisone 5 mg okwu ọnụ ugboro abụọ kwa ụbọchị, hydrocortisone 40 mg okwu ọnụ kwa ụbọchị). Fọdụ ndị dọkịta na-atụ aro ịkwụsị mituxantrone HCL ntụ ntụ (na ịga n'ihu nke ọgwụgwọ corticosteroid naanị) na ndị ọrịa ka na-azaghachi mgbe ụyọkọ ntụpọ HCL mitoxantrone gbakọtara nke 140 mg / m2 n'ihi ihe egwu nke ọrịa cardiac.
Ọkpụkpụ myelosuppression nwere ike ime. Ezigbo izere iji ndị ọrịa nwere ọgụgụ isi neutrophil <1500 / mm3, belụsọ maka ọgwụgwọ nnukwu myeloid (myelogenous, nonlymphocytic) leukemia. nyochaa ọnọdụ hematologic nke ọma. (lee mmetụta n'okpuru ịkpachara anya.)
Ebidola ọgwụgwọ na ndị ọrịa nwere ọtụtụ sclerosis ma ọ bụrụ na ntọala LVEF bụ <50%.
Na ndị ọrịa nwere ọtụtụ sclerosis, nyochaa LVEF site na echocardiogram ma ọ bụ MUGA tupu usoro ọ bụla; enyela ọgwụ ọzọ ma ọ bụrụ na LVEF belata na <50% ma ọ bụ ọ bụrụ na mbelata dị mkpa nke ahụike na lvef pụtara.
Ndị ọrịa nwere ọtụtụ sclerosis ekwesịghị ịnara ọgwụ agwakọta> 140 mg / m2.